Ndege dzese dzakadzimwa, zviteshi zvakavharwa seShanghai inosunga dutu reChyphoon
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Ndege dzese dzakadzimwa, zviteshi zvakavharwa seShanghai inosunga dutu reChyphoon
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Ndege dzese dzichamiswa paPudong International Airport yeShanghai mushure megumi nemana Muvhuro nekuda kwemamiriro ekunze, nepo nendege dzese dzinopfuura nendege yeHongqiao kumadokero kweguta dzichabviswa mushure me11pm zuva rimwe chetero, sekuziviswa kwakaitwa neShanghai Airport Authority. Svondo manheru.
Midziyo yemidziyo yakamiswa pachiteshi cheShanghai.
Ndege dzese dzakadzimwa paPudong International Airport yeShanghai.
Typhoon Chanthu iri kutarisirwa kurova Shanghai neMuvhuro manheru.
Mumashoko aburitswa nhasi, Shanghai International Port Group yazivisa kuti chiteshi chengarava cheShanghai chakamisa mashandiro ane chekuita nemakontena, sezvo Dutu Chanthu rinotarisirwa kumhara kumaodzanyemba kweguta Muvhuro manheru.
Ningbo Meidong Container Terminal Co munharaunda yakavakidzana yeZhejiang inomisa kumwe kushanda kwemidziyo kubva Chishanu, kambani yakati pane yayo wechat account nezuro.
Kushanda pazviteshi zvikuru pachiteshi chengarava cheZhoushan - musha kune mamwe matangi makuru ekuchengetera mafuta neChina - kwakamiswa kubva Mugovera masikati.
Kuvharwa kwechiteshi kunogona kuwedzera kunonoka kutakura uye kukanganisa matunhu epasi rese, ayo ave kutonetseka kugadzirisa marekodhi ekutengesa kubva kuChina uye mhedzisiro yekupararira kweCOVID-19.
Zvakare, dzendege dzese dzichamiswa kuShanghai Pudong International Airport mushure me11am Muvhuro nekuda kwemamiriro ekunze, nepo nendege dzese dzichipfuura nendege yeHongqiao kumadokero kweguta dzichabviswa zvakare mushure me3pm zuva rimwe chetero, sekuziviswa kwakaitwa neShanghai Airport Authority Svondo manheru.
Shanghai Hurumende yakazivisa kuti ichavharawo kindergarten uye zvikoro zvepuraimari Muvhuro masikati neChipiri, nepo dzimwe nzira dzepasi pevhu dzakamiswa uye mapaki nedzimwe nzvimbo dzekunze dzevashanyi dzakavharwa Muvhuro neChipiri.
Dunhu reZhejiang rakasimudzira mhinduro yaro yechimbichimbi kuna Chanthu kusvika padanho repamusoro neSvondo, ichivhara zvikoro pamwe nekumisa mabasa emhepo neanjanji mumaguta akati wandei, sekureva kwesangano renhau reXinhua. Zviremera zvakamisa zvakare mamwe masevhisi anomhanya-mhanya muYangtze River Delta.